House of Gucci သည် Lady Gaga နှင့်အလွန်မျှော်လင့်ထားသောရုပ်ရှင်ကား၏ပထမဆုံး trailer ဖြစ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ အသိုင်းအဝိုင်းခံစားပါ Lady Gaga နှင့်အတူအလွန်မျှော်လင့်ထားသည့်ဇာတ်ကား၏ပထမဆုံး Trailer ဖြစ်သော House of Gucci ...
Gucci ၏အိမ်မရ။ အလွန်မျှော်လင့်ထားသည့်ရုပ်ရှင်ကား၏ပထမဆုံး Trailer Ridley Scott နှင့် လေဒီဂါဂါeAdam Driver.
မနေ့ကညနေခင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ပထမဆုံးဇာတ်ကောင်ပိုစတာများ Gucci ၏အိမ်.
Lady Gaga ကဲ့သို့ Patrizia Reggiani သူသည် Adam Driver အဖြစ်ပါဝင်သောဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် Maurizio Gucciရှစ်ဆယ်နှင့်ကိုးဆယ်နှစ်များကြားဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအိမ်၏ ဦး စီးသူ၊ မမှတ်မိပါ ယာရက် Leto Paolo Gucci ရဲ့အခန်းကဏ္မှာ အယ်လ် Pacinoeဂျယ်ရမီ Irons Aldo နှင့် Rodolfo Gucci တို့အသီးသီးကစားကြသည်။
အီတလီနိုင်ငံ၌တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရိုက်ကူးထားသောယင်းရုပ်ရှင်ကိုအမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရုံများ၌နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင်စတင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင်အီတလီသို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
ယခင်ဆောင်းပါးAdam Driver သည် Burberry ရနံ့သစ်၏မျက်နှာဖြစ်သည်
နောက်ဆောင်းပါးအချိန်တိုင်းဒဏ်ရာတိုင်းကုပေးသလား။ ဆင်းရဲဒုက္ခသည်“ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်” မရှိသည့်အကြောင်းရင်း ၅ ချက်
Santoni နှင့်ကျွမ်းကျင်သောဆရာမများ - "ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပုံ"